ဆင်းရဲလို့ဆိုပြီး ရည်းစားဟောင်းရဲ့မိသားစုတွေက အရှက်ခွဲခဲ့တာကို 5နှစ်အကြာမှာ ပြန်လက်စားချေခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး - UpdateNew
June 30, 2020 UpdateNew ကြားသိသမျှ 0
မလေးရှားနိုင်ငံက @RomizaRoman အမည်နဲ့ Twitter အသုံးပြုသူတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ ဘဝအကြောင်းအဖြစ်အပျက်အားလုံးကို သူမအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ Twitter ပေါ်မှာ အရာအားလုံးပြန်လည်ဝေမျှခဲ့ပါတယ် ။ Romiza ဟာ သူမရဲ့ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ အထက်တန်းကတည်းက တွဲခုတ်ခဲ့တာပါ ။
အစပိုင်းမှာတော့ သူမတို့နှစ်ယောက်လုံး အဆင်ပြေနေခဲ့ပြီး အထက်တန်းကျောင်းပြီးသွားချိန်မှာတော့ သူမတို့ဆက်လက်သင်ကြားတဲ့ ပညာချင်းမတူညီတော့လို့ အနည်းငယ်အနေဝေးသွားခဲ့ပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း ချစ်သူကောင်လေးက တခြားကောင်မလေးနဲ့ ဖောက်ပြန်နေခဲ့တာကို သူမသိပေမဲ့လည်း အဆိုပါကောင်မလေးက လက်ထပ်ရမဲ့သူ သီးသန့်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက် သူမခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
သူမတို့ ဆက်လက်တွဲခုတ်ခဲ့ကြပြီး တစ်ရက်မှာတော့ ကောင်လေးရဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကောင်လေးရဲ့ မိခင်က သူမနဲ့အဆင်ပြေပြေရှိနေခဲ့ပေမဲ့လည်း ၊ ကောင်လေးရဲ့အစ်မဖြစ်သူကတော့ သူမကို ” နင့်ရဲ့မိသားစုက ဆင်းရဲတယ် ၊ နင်ငါတို့နဲ့ အဆင့်ချင်မတူဘူး ” ဆိုပြီး သူမအားပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
သူမကတော့ ” ဟုတ်တယ် ကျွန်မက လမ်းဘေးပျံကျဈေးသည်ရဲ့သမီး ၊ ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေက ဆင်းရဲတယ် ” ဆိုပြီးတော့သာ ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ မိသားစုက သူမကိုဘယ်လိုပဲပြောဆိုဆက်ဆံနေပါစေ သူမကတော့ ချစ်သူကို လက်တွဲမဖြုတ်ခဲ့ပါဘူး ။
တစ်ရက်မှာတော့သူမက ” ငါဘွဲ့ရရင်..အလုပ်ကြိုးစားပြီး Volkswagen ကားဝယ်စီးမယ် ” ဆိုပြီး ချစ်သူကောင်လေးကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။သို့ပေမဲ့လည်း ကောင်လေးရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကတော့ ” hahaha..အဲ့ကားက ဈေးကြီးတယ်။နင့်မိသားစုက ဆင်းရဲတာကို နင် Myvi ကားလောက်ပဲ စီးနိုင်မှာပါ ” ဆိုပြီး သူမကိုနှိမ့်ချစွာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
တစ်ရက်မှာတော့ ချစ်သူကောင်လေးဟာ သူမနားက မဖြစ်မနေငွေတောင်းချေးခဲ့တဲ့အတွက် သူမဟာမရှိတဲ့ကြားက သူငယ်ချင်းတွေစီးကနေ ချေးငှါးပြီးတောင်းခဲ့ရပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း အဆိုပါငွေတွေနဲ့ချစ်သူကောင်လေးဟာ တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အပျော်ခရီးထွက်သွားခဲ့ပြီး ၊ သူမဟာ ဘူတာမှာလာကြိုဖို့ပြောခဲ့ချိန်မှာတော့ ကောင်လေးဟာ Port Dickson ကမ်းခြေရောက်နေလို့လာမကြိုနိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ထို့ကြောင့် သူမဟာ ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အစပိုင်းမှာတော့ ချစ်သူရဲ့မိခင်က လမ်းမခွဲဖို့သူမကို တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်း နောက်ဆုံးတော့ ” ငါ့ရဲ့အနာဂတ်ချွေးမကို အစိုးရဝန်းထမ်းလုပ်တဲ့သူပဲလိုချင်တယ် ” ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြင် ၊ ချစ်သူရဲ့အစ်မကလည်း ” ဘယ်သူကနင့်ကို ဂရုစိုက်မှာလဲ ၊ နင်က သုံးလို့မှမရတာ ” ဆိုပြီးပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ပါတယ် ။
နောက်ပိုင်းသူမဟာ မခံချင်စိတ်နဲ့ နောက်ပြန်မလှည့်တမ်း 5နှစ်ဆက်တိုက် အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ အိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ၊ ကားကိုလည်း Volkswagens မဝယ်စီးနိုင်ပါဘူး ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့ ချစ်သူဟောင်းကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ Mercedes ClA AMG. ကားကိုသာ ဝယ်စီးခဲ့ပါတယ် ။
ထို့အပြင် သူမဟာ သိန်း 50 ကျော် ပေးကိုင်ရတဲ့အိတ်မျိုးနဲ့အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဆင်းရဲ့လွန်းလို့နိမ်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူဟောင်းရဲ့ မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးလုပ်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ် ။ သူမဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ အတော်လေးကိုအောင်မြင်နေတဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအကြံပေးတစ်ယောက်အနေ လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။
ဆငျးရဲလို့ဆိုပွီး ရညျးစားဟောငျးရဲ့မိသားစုတှကေ အရှကျခှဲခဲ့တာကို 5နှဈအကွာမှာ ပွနျလကျစားခခြေဲ့တဲ့ မိနျးကလေး
မလေးရှားနိုငျငံက @RomizaRoman အမညျနဲ့ Twitter အသုံးပွုသူတဈဦးဟာ သူမရဲ့ ဘဝအကွောငျးအဖွဈအပကျြအားလုံးကို သူမအောငျမွငျမှုရရှိခဲ့ပွီးနောကျမှာတော့ Twitter ပျေါမှာ အရာအားလုံးပွနျလညျဝမြှေခဲ့ပါတယျ ။ Romiza ဟာ သူမရဲ့ခဈြသူကောငျလေးနဲ့ အထကျတနျးကတညျးက တှဲခုတျခဲ့တာပါ ။
အစပိုငျးမှာတော့ သူမတို့နှဈယောကျလုံး အဆငျပွနေခေဲ့ပွီး အထကျတနျးကြောငျးပွီးသှားခြိနျမှာတော့ သူမတို့ဆကျလကျသငျကွားတဲ့ ပညာခငျြးမတူညီတော့လို့ အနညျးငယျအနဝေေးသှားခဲ့ပါတယျ ။ သို့ပမေဲ့လညျး ခဈြသူကောငျလေးက တခွားကောငျမလေးနဲ့ ဖောကျပွနျနခေဲ့တာကို သူမသိပမေဲ့လညျး အဆိုပါကောငျမလေးက လကျထပျရမဲ့သူ သီးသနျ့ရှိနခေဲ့တဲ့အတှကျ သူမခှငျ့လှတျပေးခဲ့ပါတယျ ။
သူမတို့ ဆကျလကျတှဲခုတျခဲ့ကွပွီး တဈရကျမှာတော့ ကောငျလေးရဲ့မိသားစုနဲ့တှဖေို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ ။ ကောငျလေးရဲ့ မိခငျက သူမနဲ့အဆငျပွပွေရှေိနခေဲ့ပမေဲ့လညျး ၊ ကောငျလေးရဲ့အဈမဖွဈသူကတော့ သူမကို ” နငျ့ရဲ့မိသားစုက ဆငျးရဲတယျ ၊ နငျငါတို့နဲ့ အဆငျ့ခငျြမတူဘူး ” ဆိုပွီး သူမအားပွောဆိုခဲ့ပါတယျ ။
သူမကတော့ ” ဟုတျတယျ ကြှနျမက လမျးဘေးပြံကဈြေးသညျရဲ့သမီး ၊ ကြှနျမရဲ့ မိဘတှကေ ဆငျးရဲတယျ ” ဆိုပွီးတော့သာ ပွနျလညျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ ။ ခဈြသူကောငျလေးရဲ့ မိသားစုက သူမကိုဘယျလိုပဲပွောဆိုဆကျဆံနပေါစေ သူမကတော့ ခဈြသူကို လကျတှဲမဖွုတျခဲ့ပါဘူး ။
တဈရကျမှာတော့သူမက ” ငါဘှဲ့ရရငျ..အလုပျကွိုးစားပွီး Volkswagen ကားဝယျစီးမယျ ” ဆိုပွီး ခဈြသူကောငျလေးကိုပွောဆိုခဲ့ပါတယျ ။သို့ပမေဲ့လညျး ကောငျလေးရဲ့တုံ့ပွနျခကျြကတော့ ” hahaha..အဲ့ကားက ဈေးကွီးတယျ။နငျ့မိသားစုက ဆငျးရဲတာကို နငျ Myvi ကားလောကျပဲ စီးနိုငျမှာပါ ” ဆိုပွီး သူမကိုနှိမျ့ခစြှာ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ ။
တဈရကျမှာတော့ ခဈြသူကောငျလေးဟာ သူမနားက မဖွဈမနငှေတေောငျးခြေးခဲ့တဲ့အတှကျ သူမဟာမရှိတဲ့ကွားက သူငယျခငျြးတှစေီးကနေ ခြေးငှါးပွီးတောငျးခဲ့ရပါတယျ ။ သို့ပမေဲ့လညျး အဆိုပါငှတှေနေဲ့ခဈြသူကောငျလေးဟာ တခွားမိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့အပြျောခရီးထှကျသှားခဲ့ပွီး ၊ သူမဟာ ဘူတာမှာလာကွိုဖို့ပွောခဲ့ခြိနျမှာတော့ ကောငျလေးဟာ Port Dickson ကမျးခွရေောကျနလေို့လာမကွိုနိုငျကွောငျးပွောဆိုခဲ့ပါတယျ ။
ထို့ကွောငျ့ သူမဟာ ခဈြသူနဲ့လမျးခှဲဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့ပွီး အစပိုငျးမှာတော့ ခဈြသူရဲ့မိခငျက လမျးမခှဲဖို့သူမကို တောငျးဆိုခဲ့ပမေဲ့လညျး နောကျဆုံးတော့ ” ငါ့ရဲ့အနာဂတျခြှေးမကို အစိုးရဝနျးထမျးလုပျတဲ့သူပဲလိုခငျြတယျ ” ဆိုပွီးပွောဆိုခဲ့တဲ့အပွငျ ၊ ခဈြသူရဲ့အဈမကလညျး ” ဘယျသူကနငျ့ကို ဂရုစိုကျမှာလဲ ၊ နငျက သုံးလို့မှမရတာ ” ဆိုပွီးပွောဆိုဆကျဆံခဲ့ပါတယျ ။
နောကျပိုငျးသူမဟာ မခံခငျြစိတျနဲ့ နောကျပွနျမလှညျ့တမျး 5နှဈဆကျတိုကျ အလုပျကွိုးစားခဲ့ပွီးခြိနျမှာတော့ အိမျတဈလုံးဝယျနိုငျခဲ့တဲ့အပွငျ ၊ ကားကိုလညျး Volkswagens မဝယျစီးနိုငျပါဘူး ဆိုပွီးပွောခဲ့တဲ့ ခဈြသူဟောငျးကိုတုံ့ပွနျတဲ့အနနေဲ့ Mercedes ClA AMG. ကားကိုသာ ဝယျစီးခဲ့ပါတယျ ။
ထို့အပွငျ သူမဟာ သိနျး 50 ကြျော ပေးကိုငျရတဲ့အိတျမြိုးနဲ့အတူ ဓာတျပုံရိုကျပွီး ဆငျးရဲ့လှနျးလို့နိမျခဲ့တဲ့ ခဈြသူဟောငျးရဲ့ မိသားစုတှကေိုပွနျပွီးလုပျတုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ ။ သူမဟာ ယခုအခြိနျမှာတော့ အတျောလေးကိုအောငျမွငျနတေဲ့ ငှရေေးကွေးရေးအကွံပေးတဈယောကျအနေ လုပျကိုငျနလေကျြရှိကွောငျး သိရှိရပါတယျ ။
အင်တာနက်သုံးရဖို့ ပေ နှစ်ရာခန့်မြင့်တဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ် တက်ရသူများ